Madaxwayne Gaas ”Puntland ha isku tashato” | Sahan radio
Madaxwayne Gaas ”Puntland ha isku tashato”
Hal ku dhiga xuska kowda Agoosto ee sanadkan ayaa laga dhigay Puntland ha isku tashato taasoo loola jeedo in umadda Reer Puntland ee dalka iyo dibaddba ay usoo jeestaan sidii loo dhisi lahaa wadooyinka .quruxda iyo bilicda magaalooyinka iyo hormarinta Puntland.
Madaxwayne Cabdiwali Maxmaed Cali (Gaas) ayaa sheegay inay ka go’an tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha taagan balse loo baahan yahay in laga waa toobo in beesha caalamka iyo gacan shisheeya wax laga sugo.
Shacabka Soomaaliyeed ee reer Puntland ayaa la arkay waxqabadkooda sida uu yahay markii uu madaxwayne Gaas xariga ka jaray Dhismaha Buundada Midigar maalinti 1da August oo ay wax yeelo kasoo gaareen roobabkii sanadkii hore ka da’ay qaybo ka mid ah Gobalka Nugaal.
Haddaba Shacabka Puntland ee dalka iyo dibadda ku nool waxaa looga baahan yahay inay usoo jeestaan sidii loo dhisi lahaa hormarinka dalkooda sida garoomada diyaaradaha,Wadooyinka iyo bilicda magaalooyinka.
Fadlan muwaadin ka qayb qaado hormarka baxaadawayn ee ka socda Gobaladda dal udug.